Ikhasi lasekhaya - I-Main-BLI · Izikolo zeelwimi eCanada
Izivumelwano kunye noBulungu
Elementary and High
Umgaqo wokuKhutshwa kwabafundi
Ukubhaliswa kweNkundla yoLwesihlwa
Uvavanyo lwePlabathi lwesiFrench
Uvavanyo lweNgqesho lwesiNgesi
IsiNgesi nesiFrentshi eCanada
Ukufunda ngokufunda · Ukuthanda ukufunda
Ngaba ufuna ukwazi iifizi zethu?
Indawo ezimbini eziMangalisayo
EMontreal naseQuebec City
I-Montreal yidolophu ekhethekileyo. Isixeko apho iilwimi kunye nenkcubeko zidibana khona. Isixeko esinomphunga waseYurophu esiza kukunyenga ukusuka ngosuku lokuqala.
Yayizixeko ezimbini ezikulo siqithi eSt. Lawrence River. Yindawo epheleleyo yokufunda isiNgesi kunye nesiFrentshi uze uzicwilise kwi-adventure yenkcubeko.
Kungakhathaliseki ukuba ukhetha ukuza, kukho nantoni na into enomdla kwaye imnandi ukwenza. Ingaba ehlobo, entwasahlobo, ekwindla okanye ebusika, kukho into eqhubekayo.
IQuebec iyisixeko esimangalisayo nesihle. Yintliziyo yesiFrentshi enyakatho yeMelika. Icandelo leYurophu kwilizwekazi elitsha. Ubukhulu kumanxweme eMlambo waseSt. Lawrence, eQuebec ngenye yezona zixeko ezintle kakhulu kwilizwe kunye nelikhulu lephondo laseQuebec.
Isityebi kwimbali, ubugcisa kunye nezithethe kunye nesibheno sangempela saseYurophu.
Njengesixeko esikhulu kunazo zonke saseCanada esiyi-100% i-francophone, iQuebec yindawo efanelekileyo yokuzicwilisa ngolwimi kwaye ngexesha elifanayo ujonge konke esi sixeko esihle sinakho!
I-BLI inikezela ngeentlobo ezininzi zeenkqubo ukuze zihambisane neemfuno zakho. Ku-BLI uza kufumana inkqubo oyifunayo.
Izinketho zokuHlala ezahlukeneyo
Isebe lethu lokuhlala linikeza iinketho ezahlukeneyo ongakhetha kuzo.
Phila ulwimi olufundayo ngokuthatha inxaxheba kwinkqubo yethu yentlalo enika imisebenzi emihle yonke imihla.
Siyaqinisekisa ukuba ufumana yonke inkxaso oyifunayo xa uhlala kumava okufunda.
Visa & CAQ Uncedo
Ukuba udinga i-visa yesivakalisi okanye imvume yokufunda ukuya eCanada, sinokukunceda ngenkqubo.
Sinokunyamekela yakho inshorensi yempilo, enyanzelekileyo kubo bonke abafundi abaza eCanada.
Utshintsho lwelo moya
Siyakuthabatha kwaye sikhuphe kwisikhumulo sezindiza ukuze wenze amava akho okuhamba eKhanada njengento elula kwaye ekhululekile kunokwenzeka.
Oko abafundi bethu bathethayo
Enye yamava amaninzi endiye ndawafumana. Ndandinomdla kakhulu apha eMontreal andingazi ukuba kwakufuneka uqale. Ukutya, abantu, iindawo, izinto onokuzenza, izinto ozifundayo, imihla ngemihla ufunda encinane kwimbali yaseMontreal ngendlela epholileyo
Ndiyincoma i-100% kwaye ndiza kubuya ndingacingi kabini
Umfundi wesiNgesi waseMexico
Xa ndifika eCanada, andingazi na isiNgesi okanye isiFrentshi. Emva kokuba uthathe iprogram yeBLI yeBilingual, iilwimi zam zezakhono zam ilwimi ziphuculwe kakhulu. Namhlanje ndiyakuthi Ndinguye
Abafundi ababini beBrazil - iBrazil
Ndabhalisa kwi-BLI ukuba ndifunde isiNgesi kwaye ndaba ngumfundi ophezulu phakathi kweenyanga ezili-6. Ootitshala baqeqeshe kakhulu kwaye baqinisekisa ukuba uyaqonda kwaye ufunda yonke into abakufundisayo. Amaklasi asebenzisana kakhulu. Isikolo sinabantwana behlabathi lonke ukuze ndikwazi ukwenza abahlobo abaninzi.
IsiNgesi umfundi - isiKorea
70, rue Notre-Dame O., i-400
763, rue St-Joseph E., i-104
ICOPYRIGHT 2017 BLI · Izikolo zeelwimi eCanada, ZONKE IZIQONDO EZILUNGILEYO